China H20 Timber Beam Wall Formwork orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Ny walings vy ilaina dia novokarina mifanaraka amin'ny halavan'ny tetikasa manokana.Ny lavaka miendrika lava amin'ny connecteur waling vy sy waling dia miteraka fifandraisana henjana tsy tapaka (fihenjanana sy fanerena).Ampifandraisina mafy amin'ny alalan'ny connecteur waling sy tsimaina efatra ny tavin-drano rehetra.
Ny struts panel (antsoina koa hoe Push-pull prop) dia apetraka eo amin'ny waling vy, manampy amin'ny fananganana takelaka.Ny halavan'ny struts tontonana dia voafidy araka ny haavon'ny tontonana formwork.
Amin'ny fampiasana ny fonon'ny console ambony, ny sehatra miasa sy ny betonona dia apetraka amin'ny rindrina.Izany dia ahitana: ambony console bracket, planks, vy fantsona sy sodina couplers.
1. Ny rafitra formwrok rindrina dia ampiasaina amin'ny karazana rindrina sy andry rehetra, miaraka amin'ny henjana avo sy ny fahamarinan-toerana amin'ny lanjany ambany.
2. Afaka misafidy izay akora vita amin'ny tarehy mifanaraka amin'ny zavatra takinao indrindra - ohatra, ho an'ny simenitra malefaka.
3. Miankina amin'ny fanerena simenitra ilaina, ny rairainy sy ny vy waling dia mifanakaiky kokoa na misaraka.Izany dia miantoka ny endrika tsara indrindra amin'ny asa sy ny ekonomika indrindra amin'ny fitaovana.
4. Azo amboarina mialoha eo amin'ny tranokala na alohan'ny hahatongavana any amin'ny tranokala, mamonjy fotoana, vidiny ary toerana.
5. Afaka mifanandrify tsara amin'ny ankamaroan'ny rafitra formwork Euro.
Ny fizotry ny fivoriambe
Position de walers
Mametraha walers eo amin'ny lampihazo amin'ny halavirana aseho amin'ny sary.Mariho ny tsipika fametrahana eo amin'ny walers ary ataovy ny tsipika diagonal.Avelao hitovy ny tsipika diagonal amin'ny mahitsizoro izay noforonin'ny walers roa.
Asio andry hazo eo amin'ny tendrony roa amin'ny waler araka ny refy aseho amin'ny sary.Mariho ny tsipika fametrahana ary ataovy ny tsipika diagonaly.Ataovy azo antoka fa mitovy ny tsipika diagonal amin'ny mahitsizoro izay noforonin'ny andry hazo roa.Avy eo dia amboary amin'ny flange clamp izy ireo.Ampifandraiso amin'ny tsipika manify toy ny tsipika marika ny faran'ny hazo roa.Mametraha andry hazo hafa araka ny tsipika benchmark ary ataovy azo antoka fa mifanandrify amin'ny andry hazo eo amin'ny andaniny roa.Amboary amin'ny clamp ny andry hazo tsirairay.
Fametrahana faingo manainga amin'ny hazo
Mametraka hooks manainga araka ny refy eo amin'ny sary.Tsy maintsy ampiasaina amin'ny lafiny roa amin'ny tahon-kazo misy ny fihokoana ny clamps, ary miantoka fa miraikitra ny fametahana.
Hetezo ny tontonana araka ny sary ary ampifandraiso amin'ny andry hazo ny tontonana amin'ny alàlan'ny visy manodin-tena.
teo aloha: H20 Timber Beam Slab Formwork
Manaraka: Wing Nut